Xeerka iyo Dhaqanku Waxay Bulshada ku Hagaan Isjacayl iyo Istixgalin, Hadii la Waayaana …… – Rasaasa News
Apr 11, 2010 xeerka iyo dhaqanka
Shakhsiyaadka madax gaabnida ah in ay bulshada hogaankeeda qabtaan waa laga ilaaliyaa hadii ay hogaanka qabtaana bulshadaasi kama baxdo dhibaato, sida Jwxo-shiil iyo kuwa uu abuuray ee Maykal Ninweyn ka midka yahay.
Bulshadu marka ay meel ku wada nooshay waa dhab in dhib iyo wanaag labaduba ay ka dhex dhacaan bulshadaas, wanaag bulshada dhaxdeed ka dhashaa wax lur ah ma leh talona uma baahna, talo iyo xeer waxaa loo baahdaa kolka ay bulshada ka dhexdhacdo dhibaato sida; jaa,ifooyinka af iyo adinka leh.
Xeerka ay samaystaan beelaha Somaliyeed, waxaa uu daweeyaa dhibaatooyinka beelaha, kolka ay jaa,ifo timaado waxaa wada fadhiista odayaasha ama hogaamada beelaha, waxayna dhib kasta oo dhaca ku xaliyaan xeer iyo dhaqan. Xeerka somaliduna waxaa uu u dhigmaa sharciyada caalamka laggaga dhaqmo, laakiin ma ah mid qoran, hogaamada beeluhuse korka ayey ka yaqaanaan oo jiilba jiil u dhiibaa.
Aan u daadago biyadhaca arartayda; Sheekada ninka loo yaqaan Raabi dheer [Maykal Ninweyn], oo banaan cidlo ah ka helay magac oday, ayaa gafaf lala yaaban yahay gaadhsiiyey beesha uu magaca odaynimadeeda boobay. Sanadkii ina dhaafay ayaa waxaa uu gacan qaad kala gaadhay laba nin oo ilmo adeer ah marna isu abti ah [Cabdi-wali v Tamuujo]. Beesha Cabdi-wali oo iyada uu gacanqaadku ka yimid ayaa waxay martay xeerka Somaliyeed iyada oo bixisay sabeen xidh, codsatayna in lays gacan qaado, arintaas waxaa gaashaanka ku dhuftay Maykal Ninweyn oo yidhi dagaal wax aan ahayn nama qanciyo [taladase waxaa siinayey kooxda Jwxo-shiil]. Aakhiritaankii iyada oo aan abaal loogu qabin booliska Ingriiska ayaa arinkii ku dhameeyey xeer Somali.
Xiligan, waxaa fooda iskula jira Ugaas [kooshin iyo Nuur], arin guur oo sidan u dhacday awgeed, Maykal Ninweyn ayaa gabadh ay saygeedii isku cadhoodeen oo uu ninkiina safar ku maqan yahay, gabadhii ninkii laga fasaqay waxaana loo guuriyey Ulaa oo isagu ah suul fara kuma tirsana.
Maalin dhawayd ayaa waxaa loo fadhiistay gar dhexmartay Ugaas [Kooshin iyo Nuur], Maykal Ninweyn oo matalaya beesha Ugaas Nuur, ayaa ku dooday gabadha ninku ma uusan dhaqan jirin gabadhuna waa reer Godey, dadkii garta isugu yimid ayaa aad ula yaabay gardarada beesha Maykal Ninweyn gartiina waa lagu kala dareeray. Beesha Ugaasa Kooshin ayaan iyadu ku qanacsanayn gardarada reerkan uu odayga u yaha Maykal Ninweyn.
Xaalka labada beel ayaa meel xun maraaya hadii ayna xaaja aqoon dhex galin xaalkan wuu xumaan doonaa, waxaana suurto gal ah in uu meel fog gaadho arinkan guurka gardarada ah iyo furniinka sharci darada ah ee uu aabaha u yahay Maykal Ninwayn.
Jwxo-shiil, oo ay Laba Wiil Waardiyeynayaan oo Jabuti Jooga.